यु’व’ती:को छा:ती आ:क’र्षक, टा’ई’ट ब’ना’उ’ने यी घ’रे’लु उ’पा’य जा’न्नु’हो’स्!! - Mitho Khabar
June 20, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on यु’व’ती:को छा:ती आ:क’र्षक, टा’ई’ट ब’ना’उ’ने यी घ’रे’लु उ’पा’य जा’न्नु’हो’स्!!
महिला मित्र तँपाई आफ्नो छा’तिको आ’कार सा’नो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । छा’तिको बृद्धि विकास नहुँदा कयौ महिलाहरू चिन्तित हुने गर्छन् । कोही छा’तिको सा’नो आ’कार देखेर आफ्नो व्यक्तित्व बृद्धिमा समेत क’मजोरी रहेको महशुस गर्छन् भने कोही शारीरिक सुन्दरतामा कमी आएको ठान्छन् ।
धैरेलाई थाहा नहुन सक्छ छा’ति बृद्धिका लागि घ्यूकुमारी अचुक उपाय हुन सक्छ । प्रायः मान्छे चाँया हटाउन,कपालको स्याहार गर्न र घामबाट छालालाई जोगाउन मात्र यसको प्रयोग हुने ठान्छन् । घ्यूकुमारीे प्रयोगले प्राकृतिक रुपमा छा’तिको आ’कार बढाउन सहयोग गर्छ ।
धेरै मान्छेको धारणा के छ
भने घ्यूकुमारी छा’तिमा लेपन गर्दा मात्र होइन यसको नियमित सेवनले पनि छा’तिको बृद्धि विकासमा सहयोग पुग्ने गर्छ । घ्यूकुमारीमा फायटोएसट्रोजन हुने गर्छ जसले शरीरको एसट्रोजनको मात्रालाई बृद्धि गरी छा’तिको आ’कार बढाउन मद्दत गर्छन् । यदि एलोबेरालाई कपालमा लगाउने हो भने यसले शरीरको रक्त सञ्चालनमा मद्दत गर्दछ ।
शरीरमा कहिँ चोटपटक लाग्यो भने भनि यसको प्रयोगले निको बनाउने गर्छ । एलोबेराको प्रयोगले छा’तिको भागमा रहेको न्यूट्रियनट र अक्सीजन पुयाउन मद्दत पुग्दछ । छा’ति तल झर्ने सम’स्याबाट छुटकारा पाउन अमिनो एसिडको आवश्यता पर्दछ जुन एलोबेरामा पाउने गर्छन् । अमिनो ए–सि–ड शरीरको लागि अत्यावश्यक पर्दछ र छा’तिको आ’कार बढाउने पनि मद्दत गर्छ ।